ရန်ကုန်မြို့ ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်း မျက်ရည်ယိုဗုံးဒဏ်ကိုရှောင်ရန် ဆုတ်လာကြသည့် ဆန္ဒပြသူများ။ (မတ် ၉၊ ၂၀၂၁)
မျက်ရည်ယိုဗုံး CS ခေါ် chlorobenzal malono nitrile (C10H5ClN2) poison အတွက် အဆိပ်ဖြေဆေး မရှိသေးပါဘူး။ ဒီဓါတုပစ္စည်းနဲ့ ထိပြီဆိုရင်တော့ အသားအရည် လောင်တာ၊ မျက်လုံးတွေ၊ ခံတွင်းတွေ လည်ချောင်းတွေ စပ်ပြီး ချောင်းဆိုးတာ၊ အသက်ရှုကြပ်တာ ရုတ်တရက် စိတ် ကစဉ့်ကလျားဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အများအပြား ထိမိ သွားတယ်ဆိုရင်တော့ အော့အန်စေနိုင်ပါတယ်။ (မျက်ရည်ယိုဗုံးထိရုံနဲ့ ချက်ချင်းသေဆုံး မသွားနိုင်ပေမယ့် ဥပမာ ရဲလက်ထဲမှာ ချုပ်ထားခံရတာမျိုး ထွက်ပေါက်မရှိ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးထိတာမျိုးဆို သေဆုံးတာထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)
အဓိကရုန်းနှိမ်နင်းရေးမှာ သုံးခွင့်ပေးထားတဲ့ မျက်ရည်ယိုဗုံး - CS အဆိပ်မထိအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုစားဖို့ လိုအပ်သလို ဒီ cyanocarbon ဓါတုပစ္စည်းရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒီလို နားလည်ထားရင် ရှောင်နိုင်တိမ်းနိုင်တယ်လို့ အမေရိကန်စစ်တပ် သဘာဝဝန်းကျင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးသူရအောင်က ပြောပါတယ်။
ဦးသူရအောင်။. ။“ဒီ ဓါတုပစ္စည်းက ကျနော်ပြောခဲ့သလို chain (ဓါတုတွဲဆက်မှု) ကြီးက အရမ်းရှည်တော့ သူက လေထုထက် အရမ်းလေးတယ်။ လေးတော့ သူက အပေါ်မြင့်မြင့်ကို သူမသွားနိုင်ဘူး။ သူ့အငွေ့က အပေါ်တက်ဖို့ chance အခွင့်အလန်းက နည်းတယ်။ အောက်ကိုပဲ သွားမယ်ပေါ့။ ပြောချင်တာက သူ့ကို အောက်မှာ ထားပြီး ကိုယ်က အပေါ်မြင့်မြင့်မှာနေဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီ မျက်ရည်ယိုဗုံး လာနေတာကို မျက်နှာဖုံး ဘာညာရှိတဲ့ လူက သွားပြီး တွန်းထုတ်မယ်ဆိုရင်လည် အဲဒီအလုံးကို မြေနိမ့်ရာကို ရောက်အောင် လုပ်ရမယ်။ ဒါမှ သူ့ရဲ့ ရှိသမျှ ဓါတ်ငွေ့တွေ အားလုံးက နိမ့်တဲ့နေရာ ကိုပဲ ကျသွားမယ်ပေါ့။ အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေ လုပ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လေတိုက်တဲ့ဆီကို ပြေးပါ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အငွေ့က လေအားနဲ့ လိုက်လာမှာ ကြောက်လို့။
ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟောင်ကောင်က နည်းတခုက. ဘာတွေ့လိုက်လည်း ဆိုတော့ သူတို့နိုင်ငံ တွေကတော့ ပစ္စည်းတွေ ပေါတော့။ သစ်ရွက်တွေ မှုတ်ထုတ်တဲ့ စက်ကလေးကို သယ်သွားကြတယ်။ အဲဒီ အငွေ့လာတာနဲ့ သူတို့က ဟိုဘက်ကို ပြန်မှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဆီ မလာအောင်။ အဲဒီတော့ ဒီအငွေ့က ဟိုဘက် ရောက်သွားတာ ပေါ့နော်။
နောက် ဟောင်ကောင်မှာပဲ နောက်တနည်းက မြန်မာပြည်က Generation Z ကလေးတွေလည်း လုပ်နေတာ တွေ့နေတာ ကတော့ သူတုိ့က ဖုံးအုပ်လိုက်တယ် မြန်မြန်။ အဲဒီမှာ ရေနဲ့လောင်းလိုက်တယ် မြန်မြန်။ သံမန်တလင်းပေါ်မှာ၊ လမ်းပေါ်မှာပဲ ရေနဲ့ သူ့ဟာသူ activate ဖြစ်ပစေလေ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ လူ့ခန္ဓာ လူ့ အရေပြားကို မရောက်ရင် ပြီးတာပဲ ဆိုတော့ အဲဒီနည်းတွေနဲ့ အုပ်နေတာ ဆိုတော့ အဲဒါက မနှစ်ကမှ ဟောင်ကောင်မှာ တွေ့တာတွေ ပေါ့နော်။ အဲဒါကို ဒီ မြန်မာ Generation Z ကလေးတွေက ကြိုပြီးတော့ သိနေပြီသူတို့။ အဲဒီနည်းတွေနဲ့ လုပ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ် အရမ်းများတယ်။
တကယ်လို့ သူက၊ အဲဒီ ပစ်လိုက်တဲ့ ဘူးမှာ အပေါက်ကလေး ၄ ခု ထိပ်မှာ ရှိတယ်။ သူက ကျကျချင်း ဖုံး- ဆို တန်းပေါက်တာကိုး။ အဲဒီလို ပေါက်တော့ ကိုယ်က အချိန်မှီ အုပ်နိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ မအုပ်နိုင်ရင် သူက ပူလာပြီ အောက်က သံကပါ ပူလာပြီ။ သွားကိုင်လိုက်ရင် လက်ကို ပူနိုင်တာတို့ရှိတယ်ပေါ့ေ နာ်။ တင်းနစ်ရက်ကက်ကလည်း သူက အပေါ်ကချည်း လာတာမျိုး မဟုတ်ပဲ အောက်ကလည်း လာတော့ သူက ရိုက်ရတာ ခက်တာမျိုးတို့။ ဒါမျိုးလေးတွေ ရှိတာပေါ့။ နောက် သူမသွားခင်မှာတင် အငွေ့က ကိုယ့်နှာခေါင်းထဲတို့ ဘာတို့ ဝင်လာတာတွေ ရှိတာကိုး။ အခု မြန်မာပြည်မှာ ဝတ်စားသွားတာတွေက လည်း အဲဒါမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့တော့ လုပ်ထားတဲ့ပုံပဲ။”
မေး။. ။“မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ ပစ်လာရင် ဘယ်လိုခုခံကာကွယ်တာ အကောင်းဆုံးလဲ။ လူတွေ အန္တရာယ်မရှိအောင်လေ။ အဲဒါလေး ပြောပြပေးပါ။”
ဦးသူရအောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့ ပထမဆုံးကတော့ preparation ပေါ့နော်။ မသွားခင်မှာ လုံးဝ မျက်ကပ်မှန်မတပ်ပါနဲ့။ မျက်ကပ်မှန်က အထဲထဲရောက်သွားရင် ပြန်ထုတ်ရတာ ခက်တဲ့အပြင် တချို့ဆိုရင် မျက်လုံးကို လောင်သွားပြီး မျက်စိကန်းတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ်။ အဲဒီတော့ မျက်ကပ်မှန်တပ်သူများ ထွက်မယ်ဆိုရင် မျက်မှန်ကို ပြောင်းတပ်ရမှာပေါ့။ နောက် မျက်စိကို အကာကွယ်ပေးတဲ့ goggle ပေါ့။ ရေကူးတဲ့အခါ တပ်တဲ့ goggle မျိုးလည်း တပ်လို့ ရပါတယ်။ အခုအချိန်က ကိုဗစ် ဖြစ်နေတော့ dust mask နှာခေါင်းစည်း တွေလည်းရှိပါတယ်။ dusk musk တွေနဲ့ ကာထားပြီးတော့ goggle တွေနဲ့ဆိုရင် အနည်းဆုံး နူးညံ့တဲ့အသားအရည် ထဲကို ဝင်မသွားဘူးပေါ့။ နောက် အကျီလက်ရှည်ကတော့ အမြဲ ဝတ်ရမယ်နော်။ ဒါက ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူက ထိသမျှကို သူက ပူစေမှာ ဖြစ်တယ်။ နောက် သူက ကျောပိုးအိတ်တို့ ဘာတို့ယူသွားလို့ရှိရင် အကျီအပိုတွေဘာတွေ ထည့်သွားပေါ့။
မေး။. ။“တကယ်လို့ ဒီမျက်ရည်ယိုဗုံးက အငွေ့တွေ အမှုန်တွေက ကိုယ်နဲ့ထိသွားပြီ ဆိုရင် ကော ဘာလုပ်ရမလဲ။”
ဦးသူရအောင်။. ။“ဟုတ်ကဲ့။ ခုနတုန်းက preparation ဘယ်လိုယူဖို့နဲ့ ဘယ်လိုကာကွယ်ဖို့ ကို ပြောပြီးတော့။. အခု ထိသွားပြီဆိုရင်၊ ကိုယ်ကတော့ ကာကွယ်ထားတဲ့အတွက် မျက်လုံးတို့ ပါးစပ်အထဲတို့ကို မဝင်ဘူးပဲ ဆိုပါတော့။ ဒါပေမယ့် ဒီလည်ပင်းတို့ လွတ်နေတဲ့ လက်နေရာတို့က အရမ်း ပူလာပြီ။ တခုခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ ခုနပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း အကျီအပိုကလည်း အိတ်ထဲမှာ ပါမယ်။ သူက အိတ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် အဲဒီရှိတဲ့အကျီက မထိထားဘူး ပေါ့နော်။ အသားနဲ့ အကျီအပြင်မှာရှိတဲ့ အမှုန့်နဲ့ ထပ်ထပ်ပြီးတော့ စိုစွတ်ပြီး မလောင်အောင်၊ အဲဒီအကျီကို လွှင့်ပစ်ခဲ့တာတို့ ဘာတို့လုပ်ရမှာပေါ့နော်။ နံပါတ် ၁ က။
နောက် ရေဆေးမယ် ဆိုရင် မျက်မှန်တို့ အကျီတို့ကို ဆပ်ပြာနဲ့ မြန်မြန် ဆေးလိုက်လို့ ရတယ်။ ဒီမျက်လုံးကျတော့ ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးလို့ မရတော့ဘူး။ ရေနဲ့ပဲ ဆေးရမယ်။ မပွတ်ခိုင်းဘူး။ ရေကို ဒီလို ခေါင်းတဖက်စောင်းပြီးတော့၊ ရေကိုလည်း သူကညွှစ်စရာ ပါတာလေးမျိုးဆို ကောင်းတာပေါ့။ ရေများများ မကုန်ဘူးပေါ့။ ညှစ်စရာလေးနဲ့ ညှစ်တယ်ဆိုရင်။ ဒီမျက်လုံး အထဲထဲမှာ မတော်တဆ ဒီမျက်လုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနိုင်တာတွေကို မျက်လုံး ပိတ်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ်၊ လောင်းချရမှာပေါ့။မပွတ်ပဲနဲ့ ရေအားနဲ့ပဲ။ ဒီဘက်မျက်လုံးပေါ်ကဟာ ဒီဘက် ပါသွားအောင်၊ ဟိုဘက်ကဟာ ဟိုဘက်ပါသွားအောင် ရေနဲ့ညှစ်ချဖို့။ နောက်ပြီးတော့ အဝတ်အစားတွေကို ကိုယ်ဟာကိုယ် ပြန်လျှော်မယ် ဆိုရင်လည်း ပလပ်စတိတ်အိတ်နဲ့ ထည့်ပြီး ပြန်ပြီး မထွက်အောင်ပေါ့။ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် ဆိုရင်လည်း ချီလိုက်ပေါ့။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အိမ်ရောက်မှ ပြန်လျှော်မယ် ဆိုတော့။ သူက ဆက်ဆက်ပြီး လောင်တတ်တယ်။ တကယ်လို့ အကျီရဲ့ အပြင်မှာ ရှိနေရင် နောက်တယောက်က သွားထိရင် အဲဒီလူ လက်ကို အပူလောင်တာမျိုး ဖြစ်တာပဲ။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူက စိုစွတ်တဲ့ အရာကို လောင်ဖို့ အမြဲတမ်း ကြိုးစားနေတာ။
ခုနပြောသလို ဒီဗုံးအာနိသင် လျော့သွားအောင် ရေနဲ့ လုပ်တာ မှန်သလား ဆိုတော့။ ရေနဲ့လည်း သူက စိုစွတ်တော့ activate ဖြစ်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် လမ်းကြီးက ခံစားချက် မရှိတော့ မသိဘူး။ လူ့အရေပြားက ခံစားချက်ရှိတော့ သိတယ်လေ။ အဲဒီတော့ activate မဖြစ်သေးတဲ့ အဝတ်အစားရဲ့ အပြင်ကဟာကို ထပ်မထိဖို့ ကြိုးစားရမှာ ပေါ့နော်။ တချို့ဆိုရင် ပါးစပ်တွေ ဘာတွေမအုပ်မိတော့ဒီလည်ပင်းထဲကို ဝင်သွားပြီးတော့ အရမ်းချောင်းဆိုးတာ ဘာညာ ဖြစ်ရင် ဒီအဆုပ်ထဲမှာ အောက်ဆီဂျင် မရတဲ့ လူတယေက်လို ဆက်ဆံပြီးတော့ သူ့ကို အောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့ အသက်ပြန်ကယ်တာမျိုး လုပ်ရမယ်။
နောက်ပြီးတော့ မျက်လုံးထဲကို မတော်တဆ ဝင်သွားတယ် ဆိုရင် ခုနပြောသလို ရေကို တဖက်တချက်ဆီက ဆေးတယ်ဆိုရင်လည်း အမှုန်တို့ အငွေ့လိုမျိုး မမြင်နိုင်လောက်တဲ့ အထိကို ရေနဲ့ ဆေးပေးရမှာ၊ မပွတ်ပဲနဲ့ ပေါ့နော်။
တကယ်လို့ CS poison ထိရင် အခုအချိန် အထိ antidote အဆိပ်ဖြေဆေး ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ ချောင်းအရမ်းဆိုးလို့ ဒါလေးထိုးလိုက်ရင် ချောင်းဆိုး သက်သာသွားမယ် ဆိုတာမျိုး မရှိသေးဘူး။ နောက် အရေပြားတွေဘာတွေ လောင်တယ် ဆိုရင်လည်း နေပူလောင်သလိုမျိုး ၊ မီးလောင် သလိုမျိုးပဲ ကုပေးရမယ်။ ပထမဦးဆုံးတော့ chemical တွေ မရှိအောင် လုပ်ရမှာ ပေါ့နော်။ ခက်တာက ဒီအရေပြားပေါ်မှာ ဒီအငွေ့ ကပ်နေရင် ရေလောင်းတဲ့အခါ၊ ပူလည်း ပူအုံးမယ်။ သူ့ကိုလည်း ကုန်အောင် လုပ်ရအုံးမယ်။ ရေထိတာနဲ့လည်း သူက activate ဖြစ်အုံးမယ် ဆို အဲဒီလိုမျိုး ဟာတွေ ရှိတော့ နေလောင်ထားတဲ့လူ။ မီးလောင်ထားတဲ့ လူတယောက်လို ဆက်ဆံပြီးတော့ ကုပေးရမှာပါ။”
အမေရိကန်စစ်တပ် သဘာဝဝန်းကျင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ဦးသူရအောင်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပွံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
စဈတပျအာဏာသိမျးတာကို လကျမခံပဲ လမျးတှပေျေါဆန်ဒပွနကွေတဲ့ မွနျမာပွညျသူတှေ ရငျဆိုငျနရေတဲ့ အန်တရာယျကွီးတဲ့ မကျြရညျယိုဗုံးဒဏျကနေ ကာကှယျဖို့ ကွိုတငျပွငျဆငျသငျ့တာတှနေဲ့ ထိတှမေိ့ခဲ့ရငျ ဘာလုပျသငျ့တယျ ဆိုတာတှကေို ဒီတပတျမှာ ပွောပွပေးမှာပါ။
မကျြရညျယိုဗုံး CS ချေါ chlorobenzal malono nitrile (C10H5ClN2) poison အတှကျ အဆိပျဖွဆေေး မရှိသေးပါဘူး။ ဒီဓါတုပစ်စညျးနဲ့ ထိပွီဆိုရငျတော့ အသားအရညျ လောငျတာ၊ မကျြလုံးတှေ၊ ခံတှငျးတှေ လညျခြောငျးတှေ စပျပွီး ခြောငျးဆိုးတာ၊ အသကျရှုကွပျတာ ရုတျတရကျ စိတျ ကစဉျ့ကလြားဖွဈသှားတာမြိုးတှေ ကွုံရနိုငျပါတယျ။ အမြားအပွား ထိမိ သှားတယျဆိုရငျတော့ အော့အနျစနေိုငျပါတယျ။ (မကျြရညျယိုဗုံးထိရုံနဲ့ ခကျြခငျြးသဆေုံး မသှားနိုငျပမေယျ့ ဥပမာ ရဲလကျထဲမှာ ခြုပျထားခံရတာမြိုး ထှကျပေါကျမရှိ နရောကဉျြးကဉျြးလေးမှာ မကျြရညျယိုဗုံးထိတာမြိုးဆို သဆေုံးတာထိ ဖွဈနိုငျပါတယျ။)
အဓိကရုနျးနှိမျနငျးရေးမှာ သုံးခှငျ့ပေးထားတဲ့ မကျြရညျယိုဗုံး - CS အဆိပျမထိအောငျ အတတျနိုငျဆုံး ကွိုစားဖို့ လိုအပျသလို ဒီ cyanocarbon ဓါတုပစ်စညျးရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလညျဖို့လညျး လိုပါတယျ။ ဒီလို နားလညျထားရငျ ရှောငျနိုငျတိမျးနိုငျတယျလို့ အမရေိကနျစဈတပျ သဘာဝဝနျးကငျြ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကွီးအကဲ တဦးဖွဈတဲ့ ဦးသူရအောငျက ပွောပါတယျ။
ဦးသူရအောငျ။. ။“ဒီ ဓါတုပစ်စညျးက ကနြျောပွောခဲ့သလို chain (ဓါတုတှဲဆကျမှု) ကွီးက အရမျးရှညျတော့ သူက လထေုထကျ အရမျးလေးတယျ။ လေးတော့ သူက အပျေါမွငျ့မွငျ့ကို သူမသှားနိုငျဘူး။ သူ့အငှကေ့ အပျေါတကျဖို့ chance အခှငျ့အလနျးက နညျးတယျ။ အောကျကိုပဲ သှားမယျပေါ့။ ပွောခငျြတာက သူ့ကို အောကျမှာ ထားပွီး ကိုယျက အပျေါမွငျ့မွငျ့မှာနဖေို့ လိုတယျ။ အဲဒီ မကျြရညျယိုဗုံး လာနတောကို မကျြနှာဖုံး ဘာညာရှိတဲ့ လူက သှားပွီး တှနျးထုတျမယျဆိုရငျလညျ အဲဒီအလုံးကို မွနေိမျ့ရာကို ရောကျအောငျ လုပျရမယျ။ ဒါမှ သူ့ရဲ့ ရှိသမြှ ဓါတျငှတှေ့ေ အားလုံးက နိမျ့တဲ့နရော ကိုပဲ ကသြှားမယျပေါ့။ အဲဒီလိုမြိုးလေးတှေ လုပျဖို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ နောကျပွီးတော့ လတေိုကျတဲ့ဆီကို ပွေးပါ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အငှကေ့ လအေားနဲ့ လိုကျလာမှာ ကွောကျလို့။
ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီး ဟောငျကောငျက နညျးတခုက. ဘာတှလေို့ကျလညျး ဆိုတော့ သူတို့နိုငျငံ တှကေတော့ ပစ်စညျးတှေ ပေါတော့။ သဈရှကျတှေ မှုတျထုတျတဲ့ စကျကလေးကို သယျသှားကွတယျ။ အဲဒီ အငှလေ့ာတာနဲ့ သူတို့က ဟိုဘကျကို ပွနျမှုတျထုတျလိုကျတယျ။ ကိုယျ့ဆီ မလာအောငျ။ အဲဒီတော့ ဒီအငှကေ့ ဟိုဘကျ ရောကျသှားတာ ပေါ့နျော။
နောကျ ဟောငျကောငျမှာပဲ နောကျတနညျးက မွနျမာပွညျက Generation Z ကလေးတှလေညျး လုပျနတော တှနေ့တော ကတော့ သူတုိ့က ဖုံးအုပျလိုကျတယျ မွနျမွနျ။ အဲဒီမှာ ရနေဲ့လောငျးလိုကျတယျ မွနျမွနျ။ သံမနျတလငျးပျေါမှာ၊ လမျးပျေါမှာပဲ ရနေဲ့ သူ့ဟာသူ activate ဖွဈပစလေေ။ ဘာဖွဈဖွဈပေါ့။ လူ့ခန်ဓာ လူ့ အရပွေားကို မရောကျရငျ ပွီးတာပဲ ဆိုတော့ အဲဒီနညျးတှနေဲ့ အုပျနတော ဆိုတော့ အဲဒါက မနှဈကမှ ဟောငျကောငျမှာ တှတေ့ာတှေ ပေါ့နျော။ အဲဒါကို ဒီ မွနျမာ Generation Z ကလေးတှကေ ကွိုပွီးတော့ သိနပွေီသူတို့။ အဲဒီနညျးတှနေဲ့ လုပျနပွေီ။ ဒါပမေယျ့ အန်တရာယျ အရမျးမြားတယျ။
တကယျလို့ သူက၊ အဲဒီ ပဈလိုကျတဲ့ ဘူးမှာ အပေါကျကလေး ၄ ခု ထိပျမှာ ရှိတယျ။ သူက ကကြခြငျြး ဖုံး- ဆို တနျးပေါကျတာကိုး။ အဲဒီလို ပေါကျတော့ ကိုယျက အခြိနျမှီ အုပျနိုငျရငျ ကောငျးတယျ။ မအုပျနိုငျရငျ သူက ပူလာပွီ အောကျက သံကပါ ပူလာပွီ။ သှားကိုငျလိုကျရငျ လကျကို ပူနိုငျတာတို့ရှိတယျပေါ့ေ နျာ။ တငျးနဈရကျကကျကလညျး သူက အပျေါကခညျြး လာတာမြိုး မဟုတျပဲ အောကျကလညျး လာတော့ သူက ရိုကျရတာ ခကျတာမြိုးတို့။ ဒါမြိုးလေးတှေ ရှိတာပေါ့။ နောကျ သူမသှားခငျမှာတငျ အငှကေ့ ကိုယျ့နှာခေါငျးထဲတို့ ဘာတို့ ဝငျလာတာတှေ ရှိတာကိုး။ အခု မွနျမာပွညျမှာ ဝတျစားသှားတာတှကေ လညျး အဲဒါမြိုးကို ကာကှယျဖို့တော့ လုပျထားတဲ့ပုံပဲ။”
မေး။. ။“မကျြရညျယိုဗုံးနဲ့ ပဈလာရငျ ဘယျလိုခုခံကာကှယျတာ အကောငျးဆုံးလဲ။ လူတှေ အန်တရာယျမရှိအောငျလေ။ အဲဒါလေး ပွောပွပေးပါ။”
ဦးသူရအောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့ ပထမဆုံးကတော့ preparation ပေါ့နျော။ မသှားခငျမှာ လုံးဝ မကျြကပျမှနျမတပျပါနဲ့။ မကျြကပျမှနျက အထဲထဲရောကျသှားရငျ ပွနျထုတျရတာ ခကျတဲ့အပွငျ တခြို့ဆိုရငျ မကျြလုံးကို လောငျသှားပွီး မကျြစိကနျးတာမြိုး ဖွဈတတျတယျ။ အဲဒီတော့ မကျြကပျမှနျတပျသူမြား ထှကျမယျဆိုရငျ မကျြမှနျကို ပွောငျးတပျရမှာပေါ့။ နောကျ မကျြစိကို အကာကှယျပေးတဲ့ goggle ပေါ့။ ရကေူးတဲ့အခါ တပျတဲ့ goggle မြိုးလညျး တပျလို့ ရပါတယျ။ အခုအခြိနျက ကိုဗဈ ဖွဈနတေော့ dust mask နှာခေါငျးစညျး တှလေညျးရှိပါတယျ။ dusk musk တှနေဲ့ ကာထားပွီးတော့ goggle တှနေဲ့ဆိုရငျ အနညျးဆုံး နူးညံ့တဲ့အသားအရညျ ထဲကို ဝငျမသှားဘူးပေါ့။ နောကျ အကြီလကျရှညျကတော့ အမွဲ ဝတျရမယျနျော။ ဒါက ပွငျဆငျတဲ့အနနေဲ့ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူက ထိသမြှကို သူက ပူစမှော ဖွဈတယျ။ နောကျ သူက ကြောပိုးအိတျတို့ ဘာတို့ယူသှားလို့ရှိရငျ အကြီအပိုတှဘောတှေ ထညျ့သှားပေါ့။
မေး။. ။“တကယျလို့ ဒီမကျြရညျယိုဗုံးက အငှတှေ့ေ အမှုနျတှကေ ကိုယျနဲ့ထိသှားပွီ ဆိုရငျ ကော ဘာလုပျရမလဲ။”
ဦးသူရအောငျ။. ။“ဟုတျကဲ့။ ခုနတုနျးက preparation ဘယျလိုယူဖို့နဲ့ ဘယျလိုကာကှယျဖို့ ကို ပွောပွီးတော့။. အခု ထိသှားပွီဆိုရငျ၊ ကိုယျကတော့ ကာကှယျထားတဲ့အတှကျ မကျြလုံးတို့ ပါးစပျအထဲတို့ကို မဝငျဘူးပဲ ဆိုပါတော့။ ဒါပမေယျ့ ဒီလညျပငျးတို့ လှတျနတေဲ့ လကျနရောတို့က အရမျး ပူလာပွီ။ တခုခု ဖွဈလာပွီ ဆိုရငျတော့ ခုနပွောခဲ့တဲ့ အတိုငျး အကြီအပိုကလညျး အိတျထဲမှာ ပါမယျ။ သူက အိတျထဲမှာ ရှိနတေဲ့အတှကျ အဲဒီရှိတဲ့အကြီက မထိထားဘူး ပေါ့နျော။ အသားနဲ့ အကြီအပွငျမှာရှိတဲ့ အမှုနျ့နဲ့ ထပျထပျပွီးတော့ စိုစှတျပွီး မလောငျအောငျ၊ အဲဒီအကြီကို လှငျ့ပဈခဲ့တာတို့ ဘာတို့လုပျရမှာပေါ့နျော။ နံပါတျ ၁ က။
နောကျ ရဆေေးမယျ ဆိုရငျ မကျြမှနျတို့ အကြီတို့ကို ဆပျပွာနဲ့ မွနျမွနျ ဆေးလိုကျလို့ ရတယျ။ ဒီမကျြလုံးကတြော့ ဆပျပွာနဲ့ ဆေးလို့ မရတော့ဘူး။ ရနေဲ့ပဲ ဆေးရမယျ။ မပှတျခိုငျးဘူး။ ရကေို ဒီလို ခေါငျးတဖကျစောငျးပွီးတော့၊ ရကေိုလညျး သူကညှဈစရာ ပါတာလေးမြိုးဆို ကောငျးတာပေါ့။ ရမြေားမြား မကုနျဘူးပေါ့။ ညှဈစရာလေးနဲ့ ညှဈတယျဆိုရငျ။ ဒီမကျြလုံး အထဲထဲမှာ မတျောတဆ ဒီမကျြလုံးပတျဝနျးကငျြမှာ ရှိနိုငျတာတှကေို မကျြလုံး ပိတျပွီးတော့ ဖွဈဖွဈ၊ လောငျးခရြမှာပေါ့။မပှတျပဲနဲ့ ရအေားနဲ့ပဲ။ ဒီဘကျမကျြလုံးပျေါကဟာ ဒီဘကျ ပါသှားအောငျ၊ ဟိုဘကျကဟာ ဟိုဘကျပါသှားအောငျ ရနေဲ့ညှဈခဖြို့။ နောကျပွီးတော့ အဝတျအစားတှကေို ကိုယျဟာကိုယျ ပွနျလေြျှာမယျ ဆိုရငျလညျး ပလပျစတိတျအိတျနဲ့ ထညျ့ပွီး ပွနျပွီး မထှကျအောငျပေါ့။ ကြှတျကြှတျအိတျ ဆိုရငျလညျး ခြီလိုကျပေါ့။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ အိမျရောကျမှ ပွနျလေြျှာမယျ ဆိုတော့။ သူက ဆကျဆကျပွီး လောငျတတျတယျ။ တကယျလို့ အကြီရဲ့ အပွငျမှာ ရှိနရေငျ နောကျတယောကျက သှားထိရငျ အဲဒီလူ လကျကို အပူလောငျတာမြိုး ဖွဈတာပဲ။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူက စိုစှတျတဲ့ အရာကို လောငျဖို့ အမွဲတမျး ကွိုးစားနတော။
ခုနပွောသလို ဒီဗုံးအာနိသငျ လြော့သှားအောငျ ရနေဲ့ လုပျတာ မှနျသလား ဆိုတော့။ ရနေဲ့လညျး သူက စိုစှတျတော့ activate ဖွဈမှာပဲ။ ဒါပမေယျ့ လမျးကွီးက ခံစားခကျြ မရှိတော့ မသိဘူး။ လူ့အရပွေားက ခံစားခကျြရှိတော့ သိတယျလေ။ အဲဒီတော့ activate မဖွဈသေးတဲ့ အဝတျအစားရဲ့ အပွငျကဟာကို ထပျမထိဖို့ ကွိုးစားရမှာ ပေါ့နျော။ တခြို့ဆိုရငျ ပါးစပျတှေ ဘာတှမေအုပျမိတော့ဒီလညျပငျးထဲကို ဝငျသှားပွီးတော့ အရမျးခြောငျးဆိုးတာ ဘာညာ ဖွဈရငျ ဒီအဆုပျထဲမှာ အောကျဆီဂငျြ မရတဲ့ လူတယကျေလို ဆကျဆံပွီးတော့ သူ့ကို အောကျဆီဂငျြပေးပွီးတော့ အသကျပွနျကယျတာမြိုး လုပျရမယျ။
နောကျပွီးတော့ မကျြလုံးထဲကို မတျောတဆ ဝငျသှားတယျ ဆိုရငျ ခုနပွောသလို ရကေို တဖကျတခကျြဆီက ဆေးတယျဆိုရငျလညျး အမှုနျတို့ အငှလေို့မြိုး မမွငျနိုငျလောကျတဲ့ အထိကို ရနေဲ့ ဆေးပေးရမှာ၊ မပှတျပဲနဲ့ ပေါ့နျော။
တကယျလို့ CS poison ထိရငျ အခုအခြိနျ အထိ antidote အဆိပျဖွဆေေး ဆိုတာ မရှိသေးဘူး။ ခြောငျးအရမျးဆိုးလို့ ဒါလေးထိုးလိုကျရငျ ခြောငျးဆိုး သကျသာသှားမယျ ဆိုတာမြိုး မရှိသေးဘူး။ နောကျ အရပွေားတှဘောတှေ လောငျတယျ ဆိုရငျလညျး နပေူလောငျသလိုမြိုး ၊ မီးလောငျ သလိုမြိုးပဲ ကုပေးရမယျ။ ပထမဦးဆုံးတော့ chemical တှေ မရှိအောငျ လုပျရမှာ ပေါ့နျော။ ခကျတာက ဒီအရပွေားပျေါမှာ ဒီအငှေ့ ကပျနရေငျ ရလေောငျးတဲ့အခါ၊ ပူလညျး ပူအုံးမယျ။ သူ့ကိုလညျး ကုနျအောငျ လုပျရအုံးမယျ။ ရထေိတာနဲ့လညျး သူက activate ဖွဈအုံးမယျ ဆို အဲဒီလိုမြိုး ဟာတှေ ရှိတော့ နလေောငျထားတဲ့လူ။ မီးလောငျထားတဲ့ လူတယောကျလို ဆကျဆံပွီးတော့ ကုပေးရမှာပါ။”
အမရေိကနျစဈတပျ သဘာဝဝနျးကငျြ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ အကွီးအကဲ ဦးသူရအောငျရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပှံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။